RW Rooble oo shacabka Soomaaliyed ugu hambalyeeyay maalinta calanka. (Maxuu Yari?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta RW Rooble oo shacabka Soomaaliyed ugu hambalyeeyay maalinta calanka. (Maxuu Yari?)
RW Rooble oo shacabka Soomaaliyed ugu hambalyeeyay maalinta calanka. (Maxuu Yari?)
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Ummadda Somaaliyeed ugu hambalyeeyey maalinta calankeenna ee 12ka October oo ku beegan maanta oo kale 67 sano ka hor.
Ra’iisul Wasaaraha oo soo saaray qoraal ayaa waxaa uu sheegay in maalintaan qiimaha badan uu umadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynayo, waxaana sidoo kale uu umadda Soomaaliyeed meelwalba oo ay joogaan uu u rajeeyay nabad waarta iyo Xasilooni.
“Waxaan Ummadda Somaaliyeed ugu hambalyeynayaa maalinta calankeenna ee 12ka October oo ku beegan maanta oo kale 67 sano ka hor. Calankeenna ha sarreeyo, gobannimada Soomaaliyeed ha waarto. Gallad waxaan u haynaa geesiyadii u soo halgamay difaaca Calanka iyo Ciidda.” ayuu yidhi Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Ugu dambeyn Maanta oo ay Taariikhdu tahay 12Ka October ayaa waxaa ay ku began tahay 67 sano guuradii kasoo wareegatay Calanka Soomaaliyeed, waxaana 12-kii October sanadkii 1954-tii ay aheyd markii ugu horreeysay ee la saaray Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya.